Midlalo Ukutya Ukulahlekelwa ngumzimba Amazwe ehlabathi
Amantombazana afuna ukunciphisa umzimba, basebenzisa izidlo ezahlukahlukeneyo. Namhlanje, kwi-intanethi, unokufumana inani elikhulu lokutya, eliza kunceda ngexesha elifutshane ukuphumeza iziphumo ezifunwayo. Sinikela ngokutya okulungileyo kakhulu kwilizwe.
Ukutya kwe siNgesi
Ukutya kwesiNgesi kuyingqayizivele, kuba kukubulela ixesha elifutshane kunokwenzeka ukuphumeza iziphumo ezilungileyo. Kwaye kubaluleke kakhulu - ngaphandle kokulimaza impilo. Kodwa oku kunokwenzeka kuphela xa wenza yonke into ngokuchanekileyo. Ubude bexesha lokutya lunemihla engama-21. Ukuzikhethela kwesi sondlo kukuba unokulungisa utshintsho kwiimpawu zomzimba wakho.
Umgaqo wokutya wesiNgesi ulula, kodwa kufuneka ulandele imigaqo elula rhoqo. Ukususela ekudleni kwakho kufuneka ukhiphe ngaphandle kwemveliso yepompo, izithelo ezomileyo, i-melon, iidiliya, iifomese, ityuwa kunye namazambane othosiweyo. Kwakhona, ngexesha lokutya kufuneka ufune ukusela utywala. Amanzi okusela kufuneka abe ngokubanzi kunokwenzeka. Ngaphezu koko, ngexesha lokutya linconywa ukuba lisebenzise izongezelelo ze-biological, ekubunjweni kwayo kukho i-chrome. Eli candelo liya kunceda ukukhusela isikhumba sakho kwi-sagging kwaye kuya kuqinisa iindonga ze-muscular.
Ngaphambi, indlela yokuya kutya, kufuneka ulungiselele umzimba wakho. Hlela ngokwakho iindidi zokulayisha. Ngeli xesha, isisu siya kuncipha ubuncinane. Kule mihla ungayiphuza i-kefir, ubisi kwaye udle malunga ne-100 amagremu wesonka esimnyama. Emva kweentsuku zokuzila zilandela izigaba ezintathu zokutya.
Isigaba sokuqala (iintsuku ezimbini) ubisi :
Ukutya kwasekuseni (08:00) - isonka esincinci ngesilazi yobisi;
Ukutya (12:00) - enye iglasi yobisi;
Ukutya (16:00) - isonka esincinci sesonka ngesilazi yobisi;
Ukutya isidlo (19:00) - enye iglasi yobisi.
Isigaba sesibini (iintsuku ezimbini) inyama :
Ukutya kwasekuseni (08:00) - isanti kunye ne-honey kunye nebhotela, enye indebe yetiyi nobisi;
Ukutya (12:00) - enye yeglasi yerrotti;
Ukutya (16:00) - 150 g yentlanzi ebilisiwe (inyama), isonka sesonka kunye nesitya seentlanzi okanye umhluzi womhluzi;
Ukutya isidlo (19:00) - 150 amagremu wenyama enamaqanda, amaqanda amabini, enye yeglasi ye-kefir.
Isigaba sesithathu (iintsuku ezimbini) sisiqhamo kunye nemifuno :
Ukutya kwasekuseni (08:00) - ii-oranges ezimbini okanye ii-apula;
Ukutya (12:00) - 200 amagremu eziqhamo, ngaphandle kwamabhanana kunye neidiya;
Ukutya (16:00) - isitya semfuno yemifuno, 150 g yemifuno kunye ne-vinaigrette kunye neqhekeza lesonka;
Ukutya isidlo (19:00) - 200 amagremu e-saladi kunye nemifuno okanye izithelo kunye nekomityi yetiyi nobusi.
Ukutya akukhathazi, ezinye iindlela ezintathu kufuneka zitshintshwe phakathi komnye nomnye, iintsuku ezimbini zokuqala kufuneka zihlale zingatshintshi, kwaye enye ilandelayo ibe yinto nayiphi na i-oda. Kufuneka uqikelele ukuba isonka sisetyenziswe kakuhle, oko kukuthi, ngendlela yokugcoba. Kubalulekile ukushiya ukutya ngokucophelela. Ukupheliswa kukucetyiswa ngosuku, olubandakanya ubisi. Emva koko, ncinane ncinane, yongeza izitya zakho zansuku zonke ekudleni, kodwa ungadli.
Akukho ziphikisana nale ndlela yokutya. Kodwa ngaphambi kokuba uhlale kuyo, kungcono ukunxibelelana nodokotela. Iingxelo malunga nokutya kulungile. Kodwa ungalindelanga iziphumo ezibonakalayo ngosuku lwesithathu. Emva kokuphela kokutya, unako ukunciphisa umzimba ngo-8-12 kilogram. Kodwa ukutya okunjalo kunokuphindaphindiwe ngaphezu kwesinye ngonyaka.
Abadumi bezilwanyana baye bahlakulela ngokukhethekileyo oku kutya abantu abanamafutha. Ityathwa njengeyona nto inemveliso. Kodwa akusiyo wonke umntu onomonde wokuwugqiba, kuba ixesha lokutya kweJamani liveki ezisixhenxe. Kufanelekile ukuphawula, kunye neqiniso lokuba ukutya kwekhalori yeveki yokunciphisa ukutya kunciphise. Kwaye ngeveki yesixhenxe, inani elincinci leekhalori.
Imigaqo ilula kakhulu - kufuneka udle ukutya okutsha, kunye ne-caloric intake ngosuku kufuneka ungadluli kuma-calori angu-1600. Ukususela ekudleni, kufuneka uqede ngokupheleleyo iziyobisi. Kodwa amaminerari angabonakali ngamanzi angayiphuza ubuninzi obungenamkhawulo.
Imenyu yokutya ngeveki
Ukutya kwasekuseni: indebe yendalo yelanga okanye itiye eluhlaza kunye ne-cracker encinci;
Ukutya: amaqanda ama-2 aphekwe kwinqanaba, i-80 gram yesipinashi kunye neoli yeoli, iindidi zetamatato;
Ukutya isidlo: 150 amagremu e-saladi kunye ne-anyanisi eluhlaza kunye neetamatati ngeoli yeoli, enye inkukhu enesibindi.
Lwe sibini :
Ukutya kwasekuseni: inkomishi yetiyi eluhlaza kunye ne-cracker encinci (isonka);
Ukutya: i-220 g ye-saladi kunye neyatamatayi kunye neklabishi kunye neoli yeoli, enye i-mandarin, i-orange okanye i-apula;
Ukutya isidlo: 100 amagremu e-saladi, amaqanda amabini aphekiweyo kunye ne-220 g yenyama ebilisiwe.
Isidlo sakusasa: igrisi yerusi ye-orange;
Ukutya: i-220 g yeetikiti ezibilisiwe ngeoli yeoli, iqanda elinye, elibilisiweyo elinzima kunye ne-100 g yeshizi;
Ukutya isidlo: iigramu ezingama-250 zeesabhandi, ipeyari, i-mandarin kunye ne-apula.
Ukutya kwasekuseni: igrisi yamanzi e-apple;
Ukutya: utamatisi, iigremu ezingama-250 zeentlanzi ezibilisiwe kunye ne-apula enye;
Ukutya isidlo: 150 amagremu we-saladi eluhlaza ngeoli yeoli, enye inkukhu ekhuniweyo.
Ukutya kwasekuseni: indebe yetiyi kunye nesinye isilwanyana;
Ukutya: i-160 amagremu e-saladi kunye neklabishi nedayisi yemonisi, i-200 g yokudla inyama;
Ukutya isidlo: iigramu ezili-150 zearrottyiti ezigayiweyo ngeoli yeoli, 120 grams weeshizi.
Isidlo sakusasa: igrisi yeseroti esitsha;
Ukutya: 220 g yenkukhu ephekiweyo;
Ukutya isidlo: 300 g yesaladi yesithelo (i-oranges, ii-apula, i-plums, ipereyari njalonjalo).
Isidlo sakusasa: inkomishi yetiyi kunye ne-toast;
Ukutya: 220 g yenkukhu kunye nesaladi e-120 eluhlaza;
Ukutya okudliwayo: enye ikroti enomthi kunye neoli eolikiweyo.
Ungalibali ukusela amanzi amaninzi ngosuku. Emva kokuphela kokutya, ungadli ukutya okunamafutha. Ukutya kukunceda ukucwangcisa imetabolism emzimbeni. Khumbula ukuba oku kutya kunzima, ngoko ngaphambi kokuqala kokuthintana nogqirha. Ngethuba lokutya, unokuphonsa malunga neekhilogram ezingama-20, kwaye kubaluleke kakhulu - iikhilogram ezilahliwe azibuyiswa.
Ukuba udinga ukuzenzeka ngexesha elifutshane, ukutya okuseMexican kulungele oku. Ubude bexesha lokutya liphela ezine iintsuku, kodwa ngeli xesha unako ukulahla kalula iitrogram ezintathu okanye ezine. Ngaphambi kokutya kufuneka uhlengahlengele ukuziphatha, kuba ukutya kunzima kakhulu kwaye ngeli xesha uya kuba nelambile enkulu. Kodwa iziphumo zala maxhoba.
Umgaqo olula. Kwiintsuku zokutya ungadla imveliso yobisi, imifuno kunye neziqhamo, kunye neziqhamo ezomileyo. Akunakwenzeka na ukuba ungadla ukutshaya, inqatha, i-sweet, i-baked goods, i-alcohol kunye ne-carbonated drinks.
Ukutya kwasekuseni: amaqanda amabini, i-orange kunye nentende yetiyi eluhlaza
Ukutya (kungekudala kuneeyure ezintlanu): ii-10. ziqhekeza, zihluthe phambili emanzini afudumele;
Ukutya isidlo (kungekudala ngaphezu kweeyure ezintlanu): enye ipareji kunye neglasi ye-fat kefir.
Ukutya kwasekuseni: 100 amagremu weeshizi ezinzima kunye nekomityi yekhofi yendalo;
Ukutya: elinye iqanda elibilisiweyo kunye nelinye i-orange;
Ukutya isidlo: elinye iqanda elibilisiwe kunye neetangerji ezimbini.
Ukutya kwasekuseni: indebe yetiyi eluhlaza kunye nemon;
Ukutya: isaladi yemifuno kunye neyamatamatye kunye nekhukhamba enye, ixutywe ngejisi lemon kunye ne-cheese eyi-100;
Ukutya isidlo: ingilazi yobisi oluhle.
Isidlo sakusasa: inxalenye encinci yamaphule e-oatmeal abilisiwe emanzini ngaphandle kweryuwa, unokongeza izityalo ezinomileyo;
Ukutya: isaladi yemifuno kunye neyamatato kunye nekhukhamba;
Ukutya isidlo: ii-oranges ezimbini okanye ezine i-tangerines.
Ukuze ungenayo i-drop of kilograms ngokukhawuleza emva kokutya, ukutya kwansuku zonke kufuneka kwandiswe kancane kancane kwisondlo sakho ngexabiso elincinci. Oku kutya kunqatshelwe kubantu abaneengxaki zempilo. Ukuxhamla okusemgangathweni kokutya kweMexico kukuba isisu sakho siyancipha kakhulu ngobukhulu, kwaye uya kuqhubeka udla ukutya okuncinci. Awunakuhlala kule yokutya okungaphezu kwenyanga.
Indlela yokuqhuba kakuhle ukukhupha iintsuku
Izakhiwo zokwelapha zegour
I-asthma yeBronchial: unyango, ukuthintela
I-Bangkok sisixeko seendonga
Impilo yabasetyhini nokukhulelwa
Imigaqo yokulungiswa kwezidlo ezilwandle zasemanzini
Ziyintoni na amanzi adibeneyo olwandle oluluncedo kumntu?